Mutemo wekutonga uri pamusoro pekodzero uye zvisungo zvevagari nemabhizinesi kuhurumende. Asi mutemo wezvekutonga unodzorawo maitirwo anoitwa nehurumende uye zvaunogona kuita kana ukasabvumirana nesarudzo yakadaro. Sarudzo dzehurumende dzakakosha mumutemo wekutonga. Iyi sarudzo inogona kuve nemhedzisiro inosvika kwauri. Ndiko kusaka zvakakosha kuti utore matanho nekukasira kana usingawirirane nedanho rehurumende rinezvimwe zvibereko kwauri ...
> General Administrative Mutemo Mutemo
> Kutarisirwa kwekutonga
> Chikwereti chehurumende
> Nhepfenyuro mumutemo wekutonga
Unogona kusangana nemutemo wekutonga kana uchida mvumo. Izvi zvinogona kunge, semuenzaniso, mvumo yekutipoteredza kana doro uye mvumo yekugamuchira vaeni. Mukuita, zvinoitika nguva dzose kuti zvikumbiro zvemvumo zvinorambwa zvisizvo. Zvizvarwa zvemunyika zvinogona kuramba. Izvi zvisarudzo pamvumo sarudzo dzepamutemo. Paunenge uchitora sarudzo, hurumende inosungirwa nemitemo inoenderana nezviri mukati uye nemafambisirwo anoitwa sarudzo. Kuchenjera kuve nerubatsiro rwepamutemo kana ukaramba kuramba chikumbiro chako chemvumo. Nekuti iyi mitemo inoswededzwa pahwaro hwemitemo inoshanda mumutemo wekutonga. Nekuita gweta, unogona kuve nechokwadi chekuti maitiro acho achaenderera nemazvo mune chiitiko chekukanganisa uye mune chiitiko chekukwirira.
Mune zvimwe zviitiko hazvigoneke kuisa chinopikisa. Mukufambiswa kwemamwe muenzaniso unogona kuendesa pfungwa mushure mekuita sarudzo. Mufungo maitiro ekuti iwe, semubato unofarira, unogona kutumira kune vane masimba ekupindura kuchisarudzo chekunyora. Chiremera chinogona kutora izvo zvinoratidzwa mupfungwa kana sarudzo yekupedzisira ichatorwa. Naizvozvo kuri kuchenjera kutsvaga zano repamutemo usati waendesa mafungiro ako zvine chekuita nesarudzo.
Kupa zvikwereti kunoreva kuti iwe unekodzero yekushandisa zviwanikwa zvemari kubva muboka rinodzora nechinangwa chekuti uwane mari yekuita zvimwe zviitiko. Iko kupihwa kwematsimba kunogara kune chikonzero chepamutemo. Pamusoro pekuisa pasi mitemo, rubatsiro rwuri chishandiso chinoshandiswa nehurumende. Nenzira iyi, hurumende inomutsa hunhu hunodiwa. Subsidies anowanzoiswa pasi pemamiriro. Aya mamiriro anogona kutariswa nehurumende kuti awone kana ari kuzadzikiswa.
Masangano mazhinji anotsamira pamibatsiro. Asi mumuitiro zvinowanzoitika kuti zhinjisa dzinobviswa nehurumende. Iwe unogona kufunga nezvemamiriro ezvinhu iyo hurumende iri kudzora kumashure. Dziviriro yepamutemo inowanikwawo kupokana nesarudzo yekudzosera mutemo. Nekuramba kubviswa kwemubhadharo, iwe unogona, mune dzimwe nguva, kuve nechokwadi chekuti kodzero yako kumubatsiro inochengetwa. Iwe uri kusahadzika kana rubatsiro rwako rwabviswa zviri pamutemo here kana kuti unayo mimwe mibvunzo nezve rubatsiro rwehurumende? Wobva wanzwa wakasununguka kubvunza magweta ekutonga e Law & More. Tichafara kukupa zano pamibvunzo yako maererano nerubatsiro rwehurumende.
Iwe unofanirwa kubata hurumende kana mitemo yakatyorwa munzvimbo yako uye hurumende ikakukumbira kuti upindire kana, semuenzaniso, hurumende inouya nekutarisa kana uchitevedzera mamiriro emvumo kana zvimwe zvinhu zvakatemerwa. Izvi zvinonzi zvinoshandiswa nehurumende. Hurumende inogona kutumira vatariri vechinangwa ichi. Vatariri vanokwanisa kuwana kambani yega yega uye vanobvumidzwa kukumbira ruzivo rwese rwakakosha uye kuongorora uye kutora iko kutonga. Izvi hazvitsvake kuti pane kufungidzira kwakanyanya kuti mirairo yakaputswa. Kana iwe ukasashandira pamwe pakadai, une chirango.
Kana hurumende ikataura kuti kwave nekutyorwa, iwe unopihwa mukana wekuita chero chinhu chakatemerwa kuvimbisa. Izvi zvinogona kuve, semuenzaniso, rairo pasi pechirango chekubhadhara, chirevo pasi pechirango chekutonga kana faindi yekuita. Mvumo dzinogona zvakare kubviswa nekuda kwekumanikidza.
Kadhi iri pasi pekubhadhara chirango zvinoreva kuti hurumende inoda kukurudzira kuti uite kana kuramba kuita chimwe chiitiko, mune izvo chikwereti iwe uchaita chikwereti chemari kana ukasashandira pamwe. Iyo yekuraira pasi pechirango chekutonga inoenda kunyange kupfuura ipapo. Nedanho rekutonga, hurumende inopindira uye mutengo wekupindira unotorwa kubva kwauri kubva kwauri. Izvi zvinogona kuve izvo, semuenzaniso, kana zvasvika pakuputsa chivakwa chisiri pamutemo, kuchenesa zvakakonzeresa kuputsa kwezvakatipoteredza kana kuvhara bhizinesi pasina mvumo.
Uyezve, mune zvimwe zviitiko hurumende inogona kusarudza kumisikidza faindi kuburikidza nemutemo wekutonga panzvimbo pemutemo wetsotsi. Muenzaniso weiyi ndiyo faindi yekutonga. Iyo faindi yekutonga inogona kunge yakakwira zvakanyanya. Kana iwe wakapihwa mutero wekutonga uye ukasabvumirana nazvo, unogona kukwidza nyaya kumatare.
Nekuda kwekumwe kukanganisa, hurumende inogona kusarudza kudzorera mvumo yako. Iyi chiyero inogona kuiswa sechirango, asi zvakare sekumanikidzira kudzivirira kuti chimwe chiitiko chisadzokororwe.
Dzimwe nguva sarudzo kana zviitwa zvehurumende zvinogona kukonzera kukuvara. Mune zvimwe zviitiko, hurumende ine mhosva kune iyi kukuvara uye iwe unogona kuiti kukuvara. Pane nzira dzinoverengeka dzaunoita iwe, sewe muzvinabhizimusi kana wega, ungati kukuvadzwa kubva kuhurumende.
Chiitiko chisiri pamutemo chehurumende
Kana hurumende yaita zvisiri pamutemo, unogona kubata hurumende mhosva kune chero kukuvadzwa kwawatambura. Mukuita, izvi zvinonzi zvisiri pamutemo hurumende chiitiko. Iyi ndiyo mhaka, semuenzaniso, kana hurumende ikavhara kambani yako, uye mutongi anotevera kusarudza kuti izvi hazvina kubvumirwa kuitika. Sewe muzvinabhizimusi, unogona kupa mari kurasikirwa kwawakaita nekuda kwekuvharwa kwechinguva nehurumende.
Zviri pamutemo chiitiko chehurumende
Mune zvimwe zviitiko, iwe unogona zvakare kukuvadzwa kukuvara kana hurumende yaita sarudzo yepamutemo. Izvi zvingave zvakadaro, semuenzaniso, kana hurumende ikaita shanduko kuchirongwa chekuchera matongo, chichaita kuti zvimwe zvirongwa zvekuvaka zvikwanisike. Shanduko iyi inogona kukonzera kurasikirwa kwemari kwauri kubva kubhizinesi rako kana kudzikiswa mukukosha kweimba yako. Muchiitiko chakadai, tinotaura nezve mubhadharo wekukuvara kwechirongwa kana kurasikirwa kwemubhadharo.
Magweta edu ekutonga achafara kukupa zano nezve mikana yekuwana muripo nekuda kwekuita kwehurumende.
Kuramba uye kukwidza
Pamberi pekupokana kupokana nesarudzo yehurumende kuendeswa kudare redzimhosva, nzira yekupikisa inofanirwa kutanga yaitwa. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuratidza mukunyora mukati memavhiki matanhatu kuti haubvumirani nesarudzo uye zvikonzero nei usiri kubvumirana. Zvinopokana zvinofanirwa kuitwa mune yakanyorwa fomu. Kushandiswa kweemail kunogoneka chete kana hurumende yakaratidza izvi pachena. Chinhu chinoridzirwa parunhare hachiratidzwe sechipikiso chiri pamutemo.
Mushure mekunge chiziviso chekupikisa chaiswa, unowanzo kupihwa mukana wekutsanangura zvaunopikisa nemashoko. Kana iwe ukabvumidzwa kuve wakarurama uye chinopesana chakaziviswa kuti chakanyatsoumbwa, sarudzo yakakwikwidzwa ichadzorerwa uye imwe sarudzo ichadzosera imwe. Kana usati waratidzwa kuti ndizvo zvakanaka, zvinopesana zvichaziviswa.
Kukwikwidza kupokana nesarudzo yekuramba kunogona kuiswawo kudare. Kukwikwidza kunofanirwawo kuendeswa zvakanyorwa mukati menguva yemavhiki matanhatu. Mune zvimwe zviitiko zvinogona kuitwawo nedhijitari. Dare rakazotungamira ziviso yekukwirira kudare rehurumende nechikumbiro chekutumira magwaro ese ane chekuita nenyaya iyi uye nekuzvidavirira mukutaura kwekudzivirira.
Kunzwa kuchazorongwa. Dare rinobva razongofunga nezvechisarudzo chakabvumiranwa pachinoramba. Naizvozvo, kana mutongi akabvumirana newe, iye achazongobvisa danho pachako chaunopokana. Maitiro saka haasati apera. Hurumende ichafanirwa kupa sarudzo nyowani pane chinoramba.
Nhepfenyuro mumutemo wekutonga
Mushure mekutonga nehurumende, muve nemavhiki matanhatu kuendesa chinopikisa kana kukwirira. Ukasaramba munguva, mukana wako wekuita zvinopesana nesarudzo uchapfuura. Kana pasina chipikiso kana kukwikwidza kuchiiswa kupokana chisarudzo, chinopihwa basa repamutemo. Iyo inofungidzirwa kuve inobvumirwa nemutemo, zvese maererano nekusikwa kwayo uye zvirimo. Iyo nguva yekubvumidzwa yekuisa chishorwa kana kukwirira saka chaizvo vhiki nhanhatu. Iwe unofanirwa saka kuve nechokwadi chekuti unoita rubatsiro rwepamutemo munguva. Kana iwe usingabvumirani nechisarudzo, unofanirwa kuendesa chiziviso chekupikisa kana kukwirira mukati memavhiki matanhatu. Magweta ekutonga e Law & More ndinogona kukupa zano muchiitiko ichi.
Tinogona kukwirira iwe munzvimbo dzese dzemutemo wekutonga. Funga, semuenzaniso, wekuendesa chiziviso cheanopokana kuDare reManagement vachipesana nekuiswa kwechisungo chiri pasi pemubhadharo wekutongerwa kutongwa kana kutongwa pamberi pedare pamusoro pekutadza kupa mvumo yekutipoteredza yekutendeuka kwechivakwa. Iyo yekuraira yambiro chinhu chakakosha pabasa redu. Muzviitiko zvakawanda, nezano rakakodzera, unogona kudzivirira kuenda kuhurumende.
Tinogona, pakati pezvimwe zvinhu, kukupa mazano uye kukubatsira iwe:
• kunyorera rubatsiro;
• kubatsirwa kwakamiswa uye kudzokorodza kubatsirwa uku;
• kuisirwa faindi yekushandisa;
• kurambwa kwechikumbiro chako chekuti ubvumirwe zvakatipoteredza;
• kuisa chinopikisa kuchinjirwa kwemvumo.
Kuenderera mberi mumutemo wekutungamira kazhinji basa regweta rechokwadi, kunyangwe kubatsirwa negweta kumutemo kusiri kwekumanikidza. Iwe haubvumirane nesarudzo yehurumende ine mhedzisiro inosvika kwauri here? Wobva wabatana nemagweta ehutongi e Law & More zvakananga. Tinogona kukubatsira iwe!